အခမဲ့ Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ | Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက် | အခမဲ့ Xbox လက်ဆောင်ကဒ် codes တွေကို?
ပင်မစာမျက်နှာ // ဘ‌‌လော့ခ် // အခမဲ့ Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ
ကျွန်တော်တို့ဟာ, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခိုင်မာသောခြေကုပ်ရှိသည်ဟန်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်စျေးကွက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အကြီးအတိုအရှည်နှင့်စရိတ်မှဝင်ကြပြီ။ လမ်းတစ်လျှောက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ရူပနှင့်မျှမတို့ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ကြောင်းဆိုဒ်များတစ်ပင်ပန်းတယ်အရေအတွက်ကဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစကားပြောကြှနျုပျတို့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အားဖြင့်ဖမ်းမိခဲ့သည် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ. ဤနေရာတွင်ထိုအရပ်၌တစ်ထစ်ထက်အခြား, ငါတို့အစစ်အမှန်တန်ဖိုးဘာမျှမရတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးသနားပါတီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေစုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင်အချို့သောလငျးကိုမွငျတိုငျအောငျကျွန်တော်တို့ရဲ့ညည်းတွားခြင်းနှင့် hankering နေသော်လည်းငါတို့သည်ငါတို့၏လိုက်စားဆက်ပြောသည်။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနောက်ဆုံးတော့ပယ်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ပွင့်လင်းလက်နက်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုကိုင်စွဲဖို့အခွင့်အလမ်းတယ် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ လိုက်စား။
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကိုမြန်မြန်လမ်းကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်ကိုကိုးရက်နေ့မှာဖြစ်ကြလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့ woefully ပြင်ဆင်ထားလူတွေအောက်မှာအထပ်ထပ်စိတ်ပျက်မရကြဘူးကြောင်းသေချာစေရန်သင်နှင့်အတူငါတို့အလင်း-မီးသီးယခုအချိန်တွင် share ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီ, Xbox ဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်များထဲမှအပေါင်းတို့နှင့်အတူမီးခိုးမြူမှတဆင့်ရယူခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုများကဲ့သို့အခြားဘက်ခြမ်းသို့ထွက် လာ. ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ် codes တွေကို။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ 100% လောက်စကားပြောနေကြသည် အခမဲ့လက်ဆောင်ကတ်များ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ရနိုင်ပုံကိုအပေါ်လမ်းကိုပြသခွင့်ပြု အခမဲ့ Xbox လက်ဆောင်ကဒ် codes တွေကို အတုလက်ဆောင်ကဒ်ကမ်းလှမ်းမှု၏ပြဿနာကိုနှိပ်စက်ရန်။ ဆောင်းပါး၏အဆုံးဆီသို့သင်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအကြံပြုသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကော်ဖီကြွေးလို့ခံစားရပေလိမ့်မည်။ ဒီတော့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူပေါ်နှိပ်ပါစေ အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု။
အသုံးပြုသူဖော်ရွေ, ကို Safe နှင့်အခမဲ့ Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက်!
တခြားသူတွေထက်ပိုများသောကျနော်တို့သတငျးကောငျးဆောင်လုလင်ဖြစ်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ အဆိုပါဖြည့်ဆည်း အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက်. ဒီတွင် Xbox Live ကုဒ်မီးစက်အဘယ်သူမျှမစစ်တမ်းများ ဝက်ဘ်ဆိုက်, သငျသညျ generate နိုင်ပါလိမ့်မည် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ် codes တွေကို တစ်ဦးလက်မောင်းနှင့်ခြေထောက်ပစ်စရာမလိုဘဲ။ ပိုကောင်းသေး, ဆိုက် 100% လုံခြုံလုံခြုံနှင့် legit ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လမ်းတလျှောက်တွင်အဘယ်သူမျှမပိတ်ဆို့မှုများရှိပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်ပြုသမျှအားလုံးသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ခုန်နှင့်သင့်ရွေးချယ်မှု၏လက်ဆောင်ကဒ်ရွေးကောက်သဖြင့်, စနစ်သင်တို့အဘို့လက်ဆောင်ကဒ်ထုတ်ပေးသည်တိုင်အောင်မတစ်ဦးအနေဖြင့်စောင့်ဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, ငါတို့ကရိုးရှင်းပြီးအသံအောင်ကြိုးစားနေကြသည်မဟုတ်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့အဲဒါကိုအသံကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင်က်ဘ်ဆိုဒ်အသစ်ဖြစ်ကြလျှင်, automated system ကိုသငျသညျလူသားတစ်ဦးသို့မဟုတ်မရှိမရှိအတည်ပြုရန်သင်မေးပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအုပ်ချုပ်မှုကို-ခြိုးဖောကျ Spam တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီရက်အရှိဆုံးက်ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များမှနောက်တော်သို့လိုက်စံအလေ့အကျင့်မယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျော်ထွက်မှမထင်မှတ်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ။ မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးတာနဲ့သင်ကပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ် codes တွေကို သင်ရွေးချယ်သော။ ဒါကြောင့်, အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကတ်များမျှစစ်တမ်းများ ထွက်ရှိမည်သူမဆိုများအတွက်ဝေးလံသောအိပ်မက်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ကတ်များ၏ Unlimited ပမာဏ?
ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်သငျသညျန့်အသတ် codes တွေကိုဖန်တီးနိုင်မဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဒီဆိုဒ်ကို back ပေမယ့်ကျနော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီကြေညာချက် back ပါဘူး။ သူခညျြးဆိုက်ကနေပြန်လာခဲ့ရသည်အချိန်များရှိခဲ့သည်။ သူကပြောပါတယ်ခံရ, ဤသာဓကအတော်လေးရှားပါးခဲ့ကြသည်။ အများဆုံးအခါသမယတွင်ကျနော်တို့လက်ခံရရှိရန် deliriously ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြ အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကတ်များမျှစစ်တမ်းများ သို့မဟုတ်ညှို့ဆိုက်ပေါ်မှာငါတို့အချိန်ဖြုန်းဘို့ဆုလာဘ်ပူးတွဲ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုရှားပါးအခါသမယအပေါ်ညျြးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာဘို့ဆိုက်အကြောင်းကို bitching နဲ့တူမခံစားရဘူး။ အားလုံးပြီးနောက်ပေးနိုငျကွောငျးကိုထွက်ရှိများလွန်း legit က်ဘ်ဆိုက်များရှိနေကြသည်မဟုတ် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ် codes တွေကို မဆိုပျော့သွားတာကိုမပါဘဲ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီပေးကမ်းခြင်း၌ရက်ရက်ရောရောဖြစ်လိမ့်မည် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက် ငါတို့သည်နောက်တဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နာရီအပေါ်သို့နာရီဖြုန်းနေကြတယ်ကြောင့်ကြောင့်ဖွင့်ရှိရာအကြွေး။ ပြီးနောက်အားလုံး၏မျှော်လင့်ချက်ပြခံရထက်မဆိုးရွားခံစားချက်ရှိတယ် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ, ပြီးတော့ရက်ရက်စက်စက်ထွက်ပေါက်တံခါးကိုပြခံရ။
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဒီစကားပြော အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက် ကျနော်တို့အများဆုံးကြောင့်လိုအပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသို့ရောက်ကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးရဲ့အဆုံးမှာတကယ် ရှိ. , ကျွန်တော်သိပ်သည်းခံခြင်းထဲကပြေးကြ၏။ ဒါကြောင့်ဒီ site ပေါ်တွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်တဲ့ဘုရားသခငျ-ပို့ရန်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ အတုအခမဲ့များ၏ရမှတ်များပေးထား Xbox လက်ဆောင်ကတ်များမျှစစ်တမ်းများ ထွက်ရှိပါတယ်က်ဘ်ဆိုက်များ, ဒီ အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက် အခမဲ့, Xbox ပစ္စည်းပစ္စယချင်သူထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းကစားဘို့အဘယ်သူမျှမ-brainer ရွေးချယ်မှုဖြစ်ထွက်လှည့်ဖြစ်ပါတယ်။ Xbox Live codes တွေကိုများအတွက်ဝယ်လိုအားသတိပြုမိလျက်, site ၏ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး bombshell ဖန်တီး Xbox Live ကုဒ်မီးစက်အဘယ်သူမျှမစစ်တမ်းများ အထင်ကြီးရန်ပျက်ကွက်ပါဘူးရသော tool ကို။ အင်တာနက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ဒီယုံကြည်သည်ခံရဖို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင် အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက် တူညီတဲ့အဘို့အတောင်းဆိုချက်ကိုလည်းမရှိအခါတိုင်း, တက်ကြွခြင်းနှင့် legit codes တွေကိုနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ထိပ်တန်းထစ်နည်းပညာကို အသုံးပြု. ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားနိူးတဲ့အဖွဲ့ကဒီကိုရောက်စေဖို့နာရီ, ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်ပိုက်ဆံရှေ့ဆက်ထားရန်သူတို့၏အလုပ်များဘဝတွေကိုကနေအချိန် ယူ. , အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက် ၎င်း၏လက်ရှိပုံစံဖြစ်သည်။ ကွဲပြားနှင့်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အသက်တာ၏နယ်နိမိတ်အတိတ်ပေါက်ကွဲခဲ့သူက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များမှပယ်ဒါကြောင့်ဦးထုပ်။
အခမဲ့ Xbox လက်ဆောင်ကတ်များရရှိရန်စမ်းသပ်ပြီးနည်းလမ်း!
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျနော်တို့အနေနဲ့သာမန်နေ့ကအလယ်၌ဆိုက်အပေါ်သို့ထိ မိ. လဲရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့သညျ။ ကျနော်တို့ generate နိုင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ ခဏရဲ့အသိပေးစာမှာကုဒ်။ ဒါဟာ '' ယူရီကာ '' ယခုအချိန်တွင်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ အခမဲ့ပစ္စည်းပစ္စယချစ်သောသူ avid ဂိမ်းကစားကျနော်တို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုငါတို့သိကြ၏လိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အားလုံးမဟုတ်ကိုဗီဒီယိုဂိမ်းအပေါ်ဝေးမှုတ်ဖို့ပိုက်ဆံရှိသည်။ ဒါ့အပြင်အားလုံးမဟုတ်မိဘများလေ့လာ-ဆက်စပ်မယ့်အရာတစ်ခုခုဆီသို့အကြပ်အတည်းများနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကလေးတွေဟာတင်းကျပ်စွာပွဲချင်းပြီးအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရုန်းကန်မြင်ကြပြီ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကခံတွင်း၌အရွက်ချဉ်အရသာကိုငါသိ၏။ ကျွန်တော်ဒီဆိုဒ်ကိုသိရန်တယ်အစဉ်အဆက်ကတည်းကကျနော်တို့ကကိုယျ့ကိုယျကိုပိုက်ဆံတစ် piggy-ဘဏ်တန်ဖိုးရှိကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ငါတို့သည်အချဉ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့မှမ။ ပိုကောင်းသေး, ငါတို့ Xbox codes တွေကိုအဘို့အရူးကဲ့သို့အင်တာနက်ကို browse ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားခဲ့ရဘူး။
သတိရပါကုမ္ပဏီကြီးဂိမ်းကုမ္ပဏီများသည်၏နာမ၌ဘာမှနှင့်အရာခပ်သိမ်းအဘို့အသငျသညျအားသွင်းခြင်းဖြင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒေါ်လာသောင်းချီနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောစေ '' extras ။ ' ဒါကြောင့်အချို့ codes တွေကိုအပေါ်ကိုထုတ်ဆုံးရှုံးသူတို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်, ငါတို့သည်လူများစွာကဒီဖတ်နေနှင့်အတူဆိုက်မျှဝေစိတ်ထဲမထားပါဘူး။ ကျနော်တို့ကကတည်းကလုပ်ဖို့ညာဘက်အရာရဲ့အထင် Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက် တက်ကြွလက်ဆောင်ကတ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က generate ဖို့စွမ်းရည်ရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းနှင့်အားလုံးကနေအကြိုးခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားရနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ပြုမူဆက်ဆံ အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ် codes တွေကို။ နေဆဲ clueless နေသောသူတို့ကိုအဘို့, အခမဲ့, Xbox လက်ဆောင်ကဒ်မီးစက် မှော်တူသောအကျင့်ကိုကျင့်။ ဒါဟာလက်ရှိ Xbox ဆုကြေးဇူးကို codes တွေကိုတစ်အလွန်ကြီးမားသောစာရင်းကိုဖတ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူဖို့ကုဒ်ပေးပါသည်။ စနစ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တစ်ခုချင်းစီကုဒ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခံရမယ့်အချိန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ code ကိုသုံးနေစဉ်ဒီတော့တဦးတည်းအမှားအယွင်းများသို့ run လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
51 မှတ်ချက် ON " အခမဲ့ Xbox လက်ဆောင်ကတ်များ "
robert587မှာ: 50 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
MeowTWO3မှာ: 39 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ဒုတိယတစျခုအတှကျအသွား, အရမ်းရယ်ရတယ်, ငါ၏ကဒ်ရတယ်
Mychael6မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Bobby9မှာ: 22 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ငါ၏အ 25 $ gc တယ်
AWESOME_DUDE2မှာ: 15 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Redhorse587မှာ: 31 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ဝိုး7မှာ: 15 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ရွေးနှုတ်တော်မူ 10 မှာ: 37 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
အသွေးတော်၏ Pinguin7မှာ: 49 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
အင်အားစိုက်ထုတ်သည်လူ7မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Siron7မှာ: 36 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Dude ကကို update ကျေးဇူးပြုပြီး !! တဖန်ငါသုံးလို
s4tino6မှာ: 40 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
redheaddddsss 8 မှာ: 24 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
QWERTY 10 မှာ: 49 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
AK47 1 မှာ: 28 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Pacman 10 မှာ: 36 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Travis7မှာ: 07 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
အများကြီး wow ထိုကဲ့သို့သောမဟာမေတ္တာတော်
ANTMAN9မှာ: 23 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ငါဒီ website ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း, တကယ်ဝမ်းသာတယ် !!!
အမဲန်ဒါ 11 မှာ: 43 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
တစ်ဦး, Xbox ကဒ်နှင့်အတူအကူအညီလိုအပ်
xbox_god6မှာ: 32 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ဒါဝိဒ်သည် Roberts 10 မှာ: 32 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်4မှာ: 58 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
QWERTY5မှာ: 37 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Combatwombat 8 မှာ: 52 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Strice 12 မှာ: 33 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Crazy_Frog 1 မှာ: 34 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
RenderM7မှာ: 12 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Birchy7 1 မှာ: 55 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
ငါ၏အ Xbox လက်ဆောင်ကဒ်ရတယ်ကြောင့်ရွေးနှုတ်တော်မူသောကြောင့်အရအလွန်လွယ်ကူခဲ့တယ်
dnoyii 8 မှာ: 18 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Digi 10 မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ဒီ post ကယ့်ကိုအကြှနျုပျကိုခြီမှီဝဲခြင်း🙂
Kerns 11 မှာ: 32 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Garcia က7မှာ: 50 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Selec5မှာ: 23 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
နှင်းဆီပင်2မှာ: 01 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Tomyy7မှာ: 30 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
တစ်ဦး 50 $ လက်ဆောင်ကဒ်ထုတ်ပေးနှင့်ရွေးနှုတ်တော်မူ🙂
အရာ7မှာ: 48 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Santa 8 မှာ: 00 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Faxamu 8 မှာ: 17 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
Gotti9မှာ: 45 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
အောင်မြင်စွာ codes တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီး !!!
ဆန်ခါ 11 မှာ: 36 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
coolman 8 မှာ: 44 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
opopop 10 မှာ: 59 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
kiole 8 မှာ: 51 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ခွဲဝေမှုအဘို့အ wow, ကျေးဇူးတင်စကား
Kakkels 8 မှာ: 51 နံနက် - ပြန်ကြားချက်
ငါဒီ website ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဝမ်းသာပါတယ်
juanso 12 မှာ: 10 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Truman333မှာ: 19 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Donald4မှာ: 28 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
wok6မှာ: 29 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
စာချုပ်4မှာ: 53 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
dekan2မှာ: 57 ညနေ - ပြန်ကြားချက်
Sheng9မှာ: 35 နံနက် - ပြန်ကြားချက်